ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रिको डरलाग्दो खुलासा: ‘जेष्ठ २८ गते भित्र भुकम्प जान्छ ! लेखेर राख्नुस’ (भिडियो सहित) — ''समर्पण मिडिया''
ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रिको डरलाग्दो खुलासा: ‘जेष्ठ २८ गते भित्र भुकम्प जान्छ ! लेखेर राख्नुस’ (भिडियो सहित)
१८, जेठ २०७६
काठमाडौं : ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रीलाई धेरैले हावाका कुरा गर्ने व्यक्तिका रुपमा हेर्ने गर्छन भने कतिले उनलाई भगवान नै मान्ने गरेका छन् । उनी धेरै बोल्छन् तर जे बोलेका छन् त्यो आजसम्म नपुगेको भने बिरलै होला । यतिबेला भने ज्योतीष अर्जुन एक अन्तर्वार्तामार्फत यहि जेठ २८ गते भित्रै ६ देखि ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने खतरा देखाएका छन् ।
यो कुरा तपाई हामिले त आजसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनौँ या त अर्जुनको ज्ञानले के देख्यो त्यो पनि हामि भन्न सक्दै । त्यसैले यो कुरा कतिको साँचो हो भन्ने समयले बताउँदै जानेछ हामि त्यसैमा विश्वास गरौँ ।अर्जुजले अहिलेसम्म भनेका कुराहरु धेरै मिलेका छन् त्यसैले पनि उनी अहिले सर्वत्र चर्चामा रहेका त्योजीष बनेका छन् । अब यस अन्तवार्तामा भनेका कुरा भने कति मिल्न जान्छन् त्यो आउदा दिनले नै बताउला ।